Aslọ ndị mọnk Hosios Lukas na Gris | Akụkọ Njem
Ebe obibi ndị mọnk Hosios Lukas na Gris
Ihe e ji mara Gris bụ ịma mma nke ọdịdị ala ya na ọtụtụ ebe ndị njem nlegharị anya ọ nwere. N'etiti ha Ọ bụ ikekwe otu n'ime ndị kacha gbasasịa mana ọ bụghị maka nke ahụ na-atọchaghị ụtọ, ebe obibi ndị mọnk Hosios Lukas. Ihe ịchọ mma nke ụlọ Byzantine dị n'akụkụ Atens na mbido ya malitere na narị afọ nke XNUMX.
Na mbido, otu n’ime ụlọ ụka na-ekwo ekwo na-arụ ọrụ ebe ahụ, mana taa ọ bụ naanị ụlọ ngosi ihe nka nke omenaala na akụkọ ntolite nke mba a. Ọ bụ n’ebe ahụ ka e liri ozu Hoios Lukas, onye mọnk kwuru na ya nwere ikike ịgwọ ọrịa.
DAna m abanye ebe obibi ndị mọnk na mgbakwunye na ịga na ime ụlọ ya, ime ụlọ ya, ịmara ụka ochie na ịhụ ubi ya, ị ga-enwe ike ịmasị ọrụ nka, frescoes na eserese nke juru ebe niile. Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe owuwu n'anya ma ọ bụ na-achọkarị ịma ebe nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme, gbaa mbọ hụ na ị gara ileta ụlọ ndị mọnk Hosios Lukas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Atenas » Ebe obibi ndị mọnk Hosios Lukas na Gris
Ọdụ oftali: Ebe nwere ọtụtụ nde akụkọ ị ga-akọ ma gosi